Xukuumada Somaliya Oo Dignii u dirtay Maraakiibta Kalluumeysta. – Xogsoor News Network
Madaxweynihii hore ee Kenya oo Geeriyooday.
DAAWO: Wasiir Goodax oo mar kale ka hadlay arrinta Shahaadada Puntland una jawaabay Senator Faroole.
Jubbaland Oo Maanta Shir Deg-Deg Ah Ka Yeelatay Xaaladda Gobolka.
DHAGEYSO: Sarkaal Macawisleyda ka tirsan oo looga shakiyay inuu xiriir la leeyahay Al-Shabaab
Iscasilaad: Faatima Awaleh Cusmaan oo is casishay Duqa Caasimada dalka.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo xil wasiir u magacaabay gabar Somali ah
Hogaamiyihii Al-Qaacida ee Gacanka Carbeed oo howlgal qorsheysan lagu dilay.
Madaxweyne Qoor Qoor oo Shaaca kaqaadey qaabka lagu dhameyn karo.
Diyaarad Sida Ciidamo Xooga dalka ah Oo Ka Degtay Degmo Ka Tirsan Gobolka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa digniin u dirtay Maraakiibta sida sharci darrada ah biyaha dalka uga kalluumeysta.
Wasiirka kalluumeysiga iyo Khayraadka badda, Xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan Warsame ayaa digniin u diray Maraakiib laga leeyahay Waddamada Iiraan iyo Pakistan oo si sharci darro ah uga kalluumeysta biyaha dalkeenna.
Waan uga digeyntaa maraakiibtaasi inay si degdeg ah Waddanka uga baxaan wixii awooda ee aan saari karno iyo soo qab-qabashadoodana waan ka shaqeyneynaa. Waxaan u baahannay in cid kasta oo naga caawin karta inay naga caawiso sidii loo qaban lahaa maraakiibtaas” ayuu yiri wasiirka kalluumeysiga DFS oo wareysi siiyay warbaahinta qaranka.
Markaakiibtaasi oo ah 43 markab ayuu sheegay Wasiirku inay badankood ku jiraan Xeebaha Galmudug iyo Puntiland, ayna sababi karaan in mar kale ay burcad badeednimadii xoogeysato, waxa uuna ciidamada la dagaallanka burcad badeedda ugu baaqay in dowladda ka caawiyaan xogta rasmiga ah ee maraakiiba sida sharci darrada ah uga jillaabayana biyaha dalka.
Dowladda Soomaaliya oo sannadkii hore doomo kalluumeysi siisay shatiyo ay kalluunta Tuna uga jillaaba karaan biyaha dalka ayaa xoogga saareysa in badaha dalku ay u noqon amni shirkadaha kalluumeysiga caalamku ay ugu soo dhiirradaan inay si sharci ah uga kalluumeystaan, shacabka iyo dowladda Soomaaliyeedna ay faa’iido uga helaan.
Dowladda Kenya ayaa dib u dhigtay kulan ay yeelan lahaayeen Madaxweynayaasha Soomaaliya, Kenya iyo Raisulwasaaraha Ethopia. Qoraal kasoo baxay wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa lagu sheegay in cabsida Cudurka Carona-virus dartii loo baajiyay kulankii labadda Madaxweyne iyo Raisulwasaaraha Ethopia.
DAAWO :- Cali Ugaas Cabdulle oo sheegay in abgaal dulqaadkii kadhamaaday
Madaxweynaha Qaranka Somaliya Mudane Farmaajo oo Magaalada Adis Ababa kula kulmay Madaxa.
Kiiskii ugu horeeyey ee Corona Virus oo laga helay Kenya
SAWIRRO: Dad badan oo lagu Xasuuqay dalka Jarmalka.
Kuxigeenka Horjooge Xaaf oo beeniyay inay heshiis la galeen Madaxweyne Qoor Qoor